निर्वाचन आचारसंहिता आजदेखि लागु, के के गर्नु हुदैन ? - Samatal Online
निर्वाचन आचारसंहिता आजदेखि लागु, के के गर्नु हुदैन ?
२५ चैत्र २०७८, शुक्रबार Santa Kumar Shrestha0Comments
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आजैदेखि आचारसंहिता लागू गरेको छ । आयोगको आज बसेको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धि आचारसंहिता शुक्रबारदेखि नै लागु हुने गरि निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीय तह सम्बन्धित निर्वाचन आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित यसअघि नै भइसकेको छ । यो आचारसंहिता सरकारी अधिकारीदेखि मतदातासम्मलाई लागू हुने आयोगले जनाएको छ । एकभन्दा बढी राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलको भातृ संगठनले एकै समयमा एकै स्थान वा मार्गमा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
के गर्न हुँदैन ?
– कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक मेसेन्जर, ट्विटर, भाइवर, युट्युब, इन्स्टाग्राम जस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी तथ्यहीन सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नहुने ।